Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana indray an'i James Bowie | Phil Collins: Ahoana ny fanamafisana ny Alamo manambara ny androm-piainany taloha - Reinkarnation fikarohana
Proposed by: ReincarnationResearch.com mpanohana
Phil Collins dia mpitendry mozika anglisy malaza eran-tany. Rehefa avy nilalao amponga sy nihira ho an'ity tarika ity Genesis, dia nandeha tamin'ny asa mahomby solo tena izy.
Phil dia manana filokana tsy mahazatra loatra amin'ny mpitendry mozika iray teraka tany Royaume-Uni. Manana tombony be izy amin'ny Ady fiadiana amin'ny Alamo, izay nitranga tao 1866. Ny Alamo dia fiarovana amerikana tany Texas izay nanafika ny tafika Meksikana, satria ny Texans dia nitaky ny fahaleovantenany avy any Mexico, izay nampanjaka an'io tany io.
Collins dia manana famoriam-bola be dia be avy amin'ny Alamo ary efa nanao fampisehoana nandritra ny ady izy ireo. Nanolotra ny tahiriny tany amin'ny State Texas i Collins. Ho fankasitrahana, ao amin'ny 2015, ny antenimieram-panjakan'ny fanjakana dia nanao an'i Collins ho olom-pirenen'ny Texas.
Phil Collins ny firaisana alohan'ny ady amin'ny Alamo, izay tsy mitombina tsara dia mitaky ny fanontaniana raha toa ka teo tokoa i Collins, tao amin'ny Alamo, nandritra ny androm-piainany taloha.
Mpanohana ny ReincarnationResearch.com dia nanolo-kevitra fa i Collins dia James Bowie nandritra ny androm-piainana taloha, izay mpilalao lehibe tamin'ny ady tao Alamo. Bowie dia nalaza tamin'ny antsy nolalaoviny, izay fantatra amin'ny anarana hoe Môrmôna Bowle antsy.
Nandritra ny fivoriana niarahana tamin'i Kevin Ryerson, Ahtun Re, mpitari-tolona iray nampitain'ny mpankafy trance Kevin Ryerson, izay naneho ny fahaiza-manao ny lalao fiainana taloha miaraka amin'ny mari-pahaizana ambony, dia nanamafy fa i Phil Collins dia James Bowie nandritra ny androm-piainany taloha.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy mitovitovy endrika amin'ny endri-bolo fampirantiana na haorinan-tarehy ho an'i James Bowie sy Phil Collins.
Fiovana eo amin'ny tanindrazana na dia Reincarnation aza: Teraka tany Etazonia i James Bowie, raha i Phil Collins dia teraka tany Royaume-Uni. fahalalana izay afaka manova ny zom-pirenena, ny finoana ary ny firehana ara-poko manomboka amin'ny androm-piainany mankany amin'ny iray hafa dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa.
Fitondran-tena taloha: Miaraka amin'ny tsikombakomba aminy amin'ny Alamo i Phil Collins dia toa nanolotra ny fiainany ho James Bowie.
Raharaha fampidiran-dresaka fampiraisana: Matetika, olona tsy takatry ny saina ny fisian'izy ireo taloha. Ireo tranga fanakorontanana hafa momba ny fifandraisana dia misy:
Halle Berry Reincarnation raharaha
Laurel sy Hardy Reincarnation cases